xog baahiye - Page 2 of 8 - xog xaqiiqo ah
Fashil: Daawo manaal beeldajiye kudirtay isha aziiz king Ck iyo xog sir
Daawo: qamar suugani oo si kulul ugu Soo jawaabay ugbaad aragsan sir hoose fashilay
Fashil:King ck oo muuqaal sir ah laga duubay,arrin mucjiso ah na bannaanka soo dhigay.
Naxdin:Sharma boy oo dil ugu hanjabay Dabcasar kadib sir culus oo uu ka faafiyay.
Deg deg:Dabcasar oo baalasha ka rifay sharma boy, sir culusna faafiyay.
Deg deg:Sharma boy oo la ilmeeyay dhacdo mucjiso ah oo ku qabsatay garowe.
DEG DEG: ugbaad aragsan oo bahdishay ninkedii hore qamar suugani Arin la yaab leh sheegtay
Subxaanallah: Queen qaawan oo muuqaal mucjiso ah soo duubtay kadib dagaalkii isha aziiz.
Subxanallah:Safiyo tusmo oo arrin mucjiso ah shaacisay kadib markii sawir ay leedahay laga been abuurtay.
Subxanallah:gabar tiktok caan ka ah oo Somali ah ayaa KU biirtay filimaanta anshax xumada iyo sababta keentay
Naxdin:gabar caan oo sheegtay iney uur u leedahay ninka qabo shaadiyo sharaf iyo Shaadiyo sharaf oo qeylo afka furatay
Daawo: kamerada qarsoon oo duubtay qaraxii buska ciyaartoyda jubaland oo wadada Lagu aaasay iyo dadkii ka dambeyay
Dagaal:Sharma boy oo cod sir ah laga duubay iyo dagaalka Sharma boy iyo xaaskisa oo meel xun gaaray xog sir ah
Fadeexo:Ck oo mar kale dhulka la jaray Shiine culey iyo Dirisle oo ku farxay.
Degdeg:Dahir Calasow oo oohin afka furtay kadib weerarkii Ck.